M/weynaha Somaliland oo ku dhawaaqay in cuna-qabateyn ay DF Soomaaliya ku soo rogtay maamulkiisa. – Puntlandtimes
M/weynaha Somaliland oo ku dhawaaqay in cuna-qabateyn ay DF Soomaaliya ku soo rogtay maamulkiisa.
HARGEYSA(P-TIMES)- Madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay cunaqabateyn uu sheegay in ay uga timid dhinaca dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, gaar ahaana dhinacyada Mashaariicda iyo duulimaadyada diyaaradeed, wuxuuna sheegay in arrimahaas ay hadda banaanka u so baxeen.
Madaxweynaha Somaliland wuxuu sheegay in ay dhamaan xukuumada Faderaalku burburisay heshiisyadii ay horey u galeen dawladdihii hore, islamarkaana ay cuna-qabatayn saartay, guud ahaan mashaariicdi caalamku ka fulinjiray Somaliland,kuwaasoo uu sheegay in loo wareejiyay magaalada Muqdisho.
Col, Biixi wuxuu sheegay in la diiday mashruucii dekeda Berbera iyo kuwa maxali ah oo laga fulinayey gudaha deegaanadas, taas oo ka dhigan war weyn oo aysan wali cadeynin dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, inkastoo ay dhinacyada u dhaxayso xiisado siyaasadeed.
Mar la weydiiyey heshiisyada uu sheegay in ay ka baxday dawladda Faderaalka ayuu sheegay in ay ka mid ahaayeen ”in hawada Soomaaliya laga maamulo magaalada Nairobi,dhaqaalaha ka soo baxana Somaliland barkeeda la siiyo”,isagoo xukuumadda Soomaaliya ku eedeeyay in ay la wareegtay hawadii labada dhinac ka dhexaysay,islamarkaana ay leexsatay dhammaan dhaqaalihii ka soo bixi jiray.
Hadalkan Madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku so beegmaya xili ay xiisado waa weyn oo siyaasadeed iyo kuwa amniga ahba ka jiraan mandiqada, gaar ahaana xaduuda ay wadagaan Puntland markii ay Somaliland biolowgii sannadkan bilowday dhaqdhaqaaqyo ciidan.